အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကလိုကလူလေး......
ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်အဟာ အဟာ ဟ ဟ.............
အင်းလေ ဒီလောက်လှနေမှတော့ မင်းသမီးမလုပ်ရင် နှမျောစရာ
ဒါရိုက်တာ တွေ ကလဲ တနေ့တနေ့ အိမ်လာခေါ်လိုက်ကြတာ
ငြင်းရမှာလဲ အားနာစရာ ကဲကဲ
တပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက်တော့ ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်လေ
ဟေး..................... မီးမီး ကတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆီးရီးယပ်စ်နော်
အင် လူကိုဘာလာလုပ်တာလဲ မျက်စိစူးတယ် နော်
အင်း ရှော့ပ်ပင်းထွက်အုံးမှ ကားမောင်းသွားမယ်
အဟီး ဦးဦးရဲကြီး နေကန်းလား?
အဲ ဦးဦးရဲရေ မီးမီး ကိုဖမ်းပါနဲ့ မီး က နာမည်ကြီးမော်ဒယ်လ် ကလိုကလူလေးပါ
ခိခိ ဦးဦးရဲ က သဘောကောင်းတယ် ခစ်ခစ်
မနက်ဖြန်ကျတော့ ရိုက်ကွင်းမှာ လှနေမှဖြစ်မှာ
တနေ့တနေ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေရတာနဲ့ပဲလူကနားရတယ်ကိုမရှိဘူး ဟွန်း............ အနုပညာကြေးတော့တိုးတောင်းမှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်
အင်း ရေမိုးတော့ချိုးပြီးပြီ ရှုတင်သွားရအုံးမှာပါလား..........
ဟူး........... တနေ့တနေ့ လုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်
ကြော်ညာ ရိုက်ကွင်းတခု အတွင်းတနေရာ..................
ပါလားလာ လားလား ဗုံ
(ချစ်ရတဲ့ ကလိုကလူလေး အတွက် အမှတ်တရ)
Posted by တီချမ်း at 11:29 AM
tune April 7, 2009 at 12:58 AM
ဆူမယ့်သူ လိုနေ :P
ကောင်းကင်ပြာ April 7, 2009 at 1:15 AM
ချစ်စရာ ကလေးလေး လာကြည့်တယ် တီချမ်းရေ၊
အိပ်နေလိုက်တာများ သိုးနေတာပဲ .. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော် .... ပါးကိုဆွဲပြီး ပါးစပ်လေးကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် နမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ် ...
အန်တီချမ်း April 7, 2009 at 1:28 AM
ကို-မ နေဒေးသစ် (ကိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်)
တီ့လာနမ်းချည် နမ်းချင်ရင် ခစ်ခစ်ခစ်
အီးဟီး .... တီချမ်းကြီးတော့ နမ်းချင်ဝူး နမ်းချင်ဝူး .... ကြောက်ရယ် ... ဒီလိုလုပ်မယ် ပါးစပ်နမ်းတော့ဝူး ... ပါးကိုပဲ နဲနဲကိုက်မယ်နော် .. တီချမ်းရလား :D ( မှတ်ချက် ... ကိုလား မလား သိချင်ရင် Blog ကို လိုက်ခဲ့ သည်းလေးပုံပြမယ် ) ဟဲဟဲ ကြုံတုန်းကြွားမှ :D
မိုးခါး April 7, 2009 at 7:08 AM
တီရေ .. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ကလေးလေးနော်
မျက်လုံးလေးကိုဝိုင်းနေတာပဲ လှလိုက်တား)
ကလေးတွေကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ် .. ငြိမ်းချမ်းတယ်..
မမသီရိ April 7, 2009 at 8:34 AM
ချစ်စရာ ကလေးလေး ပဲ
ကလေးက အသည်းယားစရာနော်........ ပရိသတ်တွေကိုတော့ စိတ်မကုန်ပါနဲ့ မီးမီးလေးရယ်... ကုန်မယ့်ကုန် တီချမ်းကိုပဲ စိတ်ကုန်လိုက်နော်... အဟိ...
sweetpeony April 7, 2009 at 11:28 AM
အဲလိုပဲ ချစ်ဖို့ ကောင်းနော်..
မေ့သမီး April 7, 2009 at 1:17 PM
ကလေးလေးကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ တီချမ်းနဲ့တော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးမလား။ တီချမ်းနဲ့တူရင် အဲလိုဘယ်ချစ်ဖို့ကောင်းမလဲနော်။
ဘာတွေတုန်း April 7, 2009 at 2:43 PM
ဟယ် ကရေးရေးက ချစ်ချာလေးတော့ ...
Dream April 7, 2009 at 4:05 PM
အဲ့ခေးရေးက ရှစ်ရှရာရေး.. တီချမ်းများ မွေးထားဒါရားမ တိဖူး.. ခစ်ခစ်။.
အဲ့ခေးရေးရေးကို မြင်ဖူးတယ်... ဘယ်တု့ချီမှာရဲ မတိဖူး.... မတ်ယုံးပူးပူး မို့ မတ်မိနေဒါ.... အဒူ့ခရေးရဲ တိဖူး.... မေ့နေဒါ...
Rita April 7, 2009 at 5:44 PM
အို သမီး ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့
မကြာမီ လာမည် မျှော်
ဖိုးဂျယ် April 7, 2009 at 10:29 PM
တီလဲ စိန်နဲ့ အဲ့လိုလေး မွေး